Shan bar oo dibad-baxayaashu ku kulmi doonaan Sabtiga | KEYDMEDIA ONLINE
Shan bar oo dibad-baxayaashu ku kulmi doonaan Sabtiga
Guddiga abaabulka banaan-baxa Sabtida oo ah mid u gaar ah Golaha Midowga Musharixiinta oo maanta ku kulmay Muqdisho ayaa shaaciyay goobaha ay isugu imaan doonaan dibad-baxayaasha iyo qaabka ay ku tagi doonaan Taallda Daljirka Daahsoon.
MUQDISHO, Soomaaliya. – Guddigaan oo u badan dhalinyaro ka kala tirsan Xisbiyada Mucaardka oo ay wehliyaan Siyaasiyiin iyo madax ka mid ah Golaha Midowga Musharixiinta ayaa dadka doonaya in ay ka qeyb qaataan Mudaharaaadka u sheegay shan goobood oo la isugu imaan doono ka hor inta aan la tagin Daljirka.
Shanta BAR, ‘Goobood’ ee la qorsheeyay in socadka laga billaabo ayaa kala ah Isgooska Fagax, Isgooska Siinaay, Isgooska Mirinaayo, Isgooska KM4 Iyo Isgooska Soobe.
Guddigu wuxuu sheegay in halka ugu weyn ee la isugu tagi doono ay tahay Fagaaraha Daljirka Daahsoon, si Madaxweynaha Waqtigu ka dhamaaday Farmaajo loogu sheego in mudadiisii sharciga aheyd dhamaatay, Villada-na uu ku fadhiyo sifo sharci darro ah.
Sii-hayaha Xilka Ra’iisul Wasaaraha Rooble ‘Rogane’ ayaa la filayaa inuu caawa la kulmo Golaha Midowga Musharixiinta oo ay ku ballansan yihiin in ay yeeshaan kulanii saddexaad.